Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): ယုံကြည်မှု၊ ကြောင်းကျိုးတရား နှင့် အစွန်းရောက်မှုများ။
ယုံကြည်မှု၊ ကြောင်းကျိုးတရား နှင့် အစွန်းရောက်မှုများ။
နိုင်ငံတိုင်း၊ ဒေသတိုင်း၊ လူမျိုးတိုင်း၊ လူမျိုးစုတိုင်း တို့တွင် ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ထုံးတမ်းစဉ်လာ အရ- ယုံကြည် မှုများ ရှိစမြဲပါပေ။
ရှေးခေတ် အီဂျစ်လူမျိုး တို့အနေဖြင့် ဖာရိုဘုရင် တို့သည် နေနတ်သားမှ ဆင်းသက် လာသည် ဟူ၍ လည်းကောင်း၊
ရှေးခေတ် အက်ဇ်တက် Aztec လူမျိုးတို့အနေဖြင့် နတ်မင်းတို့အား လူ၏ နှလုံးသားဖြင့် ယဇ်ပူဇော် ရမည် ဟူ၍ လည်းကောင်း၊
အနောက်တိုင်း ကလေးငယ်တို့ အနေဖြင့်- ခရစ်စမတ် ကာလတွင် စင်တာ ကလေ့ာ ကြီး အမှန်တကယ်ပင် ကောင်းကင်မှ ဆင်းသက်လာ၍ လက်ဆောင် ပစ္စည်းများကို လာပို့ ပေးသည် ဟူ၍ လည်းကောင်း၊
အနောက်တိုင်း သား အချို့ အနေဖြင့် နံပါတ် ၁၃ သည် ကံမကောင်းသော ဂဏန်း၊ ၆၆၆- သည် မိစ္ဆာတို့နှင့် ဆိုင်သော ဂဏန်း စသည်ဖြင့် ယုံကြည် သကဲ့သို့၊
တရုပ် လူမျိုးတို့ကလည်း ၄ ဂဏန်းသည် မကောင်း၊ ၈-ဂဏန်း သည် ကောင်း၏ ဟု လည်းကောင်း၊
- စသည်ဖြင့် မျိုးစုံ ယုံကြည် ထားတတ်ကြပါသည်။
အချို့သော ယုံကြည်မှုတို့သည် ထုံးတမ်းစဉ်လာ (Tradition) အနေဖြင့် လည်းကောင်း၊ အချို့တို့သည် ဓလေ့ထုံးစံ (custom) အနေဖြင့် လည်းကောင်း၊ အချို့သည် ယုံကြည် သက်ဝင်မှု အနေအထား (belief) အနေဖြင့် လည်းကောင်း၊ အချို့သည် အစွဲအလမ်း (superstition) အနေဖြင့် လည်းကောင်း၊ အချို့သည် အယူသည်းမှု (fanatic ) အနေဖြင့် လည်းကောင်း လူသားတို့ အကြားတွင် ပြန့်နှံ့ တည်ရှိနေပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး တို့သည်လည်း- မိမိတို့ ကြီးပြင်းခဲ့ရာ အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြား၊ အသက်အရွယ် အလိုက်၊ ဒေသ အလိုက်၊ မျိုးရိုး အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုများ ရှိခဲ့ကြ ပါ၏။
- အချို့သော သူများသည် တန်ခူး သာလှ၊ ထွန်းပ ကဆုန် စသော- အစဉ် အလာဖြင့် ရက်ရာဇာ ကိုရွေး၊ ပြဿဒါး ကို ရှောင်၍ အလုပ်လုပ်တတ်၏။
- အချို့က အရေးကြီးသော နေ့များဆိုလျှင် တနင်္လာနေ့ကို အလုပ်မလုပ်လို၊
- အချို့က “တ၊တန်၊ က၊ နောက်။ န၊ ၀ါ၊ ၀ါ၊ မြောက်။ တော်၊ ကျွတ်၊ မုန်း၊ ရှေ့။ နတ်၊ ပြာ၊ တွဲ၊ တောင်၊ လူတို့ဘောင် ရှောင်ရန် နဂါးလှည့်” ဆိုသည့် နဂါးခေါင်း လှည့် အတိုင်း ခရီးသွားရမည့် အရပ်မျက်နှာကို နဂါးလှည့် သင့်မသင့် စစ်ဆေးတတ်ကြပါ၏။
- မြန်မာ နိုင်ငံ အောက်ပိုင်း ဒေသများတွင် ရေငန်ပိုင် ဦးရှင်ကြီးကို ၀ါဝင်၊ ၀ါထွက် ပူဇော် တတ်ကြသလို- မြန်မာ အလယ်ပိုင်းတွင် မြင်းဖြူရှင် စသည်ဖြင့် ဒေသ အလိုက် များစွာသော ယုံကြည်မှုများ ရှိတတ်ကြပါ၏။
- အခြားခြား သော ယုံကြည်မှု- လိုက်နာမှု၊ ဓလေ့ ထုံးတမ်းများ မရေမတွက် နိုင်အောင် ရှိနေကြ ပါသေးသည်။
ထုံတမ်းစဉ်လာ၊ ရိုးရာ ဓလေ့ လိုက်နာမှုတို့သည် ယဉ်ကျေးမှု၏ အစိတ်အပိုင်း၏ ဖြစ်၏။ ယဉ်ကျေးမှုသည် လူမျိုး၏ အဆင့်အတန်း ဖြစ်၏။
ယဉ်ကျေးမှုသည် မိမိလူမျိုး၏ ကိုယ်ပိုင်မူ ကိုယ်ပိုင်ဟန် ဖြစ်၏။ ဥပမာ အားဖြင့်- မြန်မာ့ ရိုးရာ သင်္ကြန်သည် မြန်မာတိုင်းက ဂုဏ်ယူရသော ထုံးတမ်း အစဉ်အလာ ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်၏။ ထိုနည်းတူ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် တွေ့ရတတ်သော နတ် ကန္နားပွဲ တို့သည်လည်း နိုင်ငံခြားသား များက စိတ်ဝင်စားရသော ယုံကြည်မှု ဓလေ့ တစ်ခု ဖြစ်၏။
ထုံးတမ်းစဉ်လာ ယုံကြည်မှုများသည်- အခြား မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှ မထိခိုက် မပျက်စီး စေသည့် ယုံကြည်မှု ထုံးတမ်း များဖြစ်နေလျှင်- အခြားသူများ အနေဖြင့် မယုံကြည် လက်မခံလျှင် နေ- ထိုယုံကြည် လက်ခံမှုများကိုမူ အထင်သေး၊ အမြင်သေး တိုက်ခိုက် ကဲ့ရဲခြင်း မှာ မပြုသင့်သော ကိစ္စများ ဖြစ်ပါ၏။
အမျိုးသား ပညာဝန်ဟောင်း ဆရာကြီး ဦးဖိုးကျားကလည်း- သူ၏ အတွေ့အကြုံများထဲတွင် တစ်ဦး တစ်ယောက်၏ ယုံကြည်မှုကို မကဲ့ရဲ့ မတိုက်ခိုက်သင့်ကြောင်း ရေးသား ဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။
အန္တရာယ် ကင်းသည်ဟု သူ့ အနေဖြင့် ယုံကြည်ထားသော ဂါထာ လေး တစ်ခုကို အမြဲမပြတ် ရွတ်ဆို နေသူ တစ်ဦးကို မြင်တွေ့ပြီးနောက်- ထိုဂါထာသည် ဘုရားဟော မဟုတ်၊ ပါဠိ ပါဌ်သားများ မမှန်သော ဂါထာဖြစ်သည် စသည်ဖြင့် ထိုသူ၏ အားကိုးရာ ယုံကြည်မှု ကို တိုက်ခိုက် ဝေဘန်ခြင်းဖြင့် ထိုသူ့တွင် ရော၊ မိမိတွင်ပါ အကျိုးရှိနိုင် ပါ၏လား၊
ထိုသူ့ ခမှာ- မိမိလောက် ဗဟုသုတ မရှိသော သူဖြစ်ခဲ့ယင်- သူ၏ ယုံကြည် အားထားမှုတို့ ပျက်စီး သွား၍ အားကိုးရာ မဲ့သွားပါလိမ့်မည်။ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ထိုသူသည် အဝေဘန် မခံသူဖြစ်လျှင် ဤနေရာတွင် ပြောသူနှင့် အခြေအတင် ပြဿနာ ဖြစ်တော့မည် ဖြစ်သည်။
ယုံကြည်မှု တို့သည်- တစ်ချိန်က ဖြစ်ပွား ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော၊ တိုက်ဆိုင် ခဲ့သော အကြောင်း ချင်းရာ တို့ကို အမှီပြု၍ ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ရာ- ထိုကဲ့သို့ အခြေအနေ၊ ထိုကဲ့သို့ သော အကြောင်း ချင်းရာ တို့ မရှိသော အချိန် ကာလသို့ရောက်လာသော အခါ မည်သည့် အကြောင်း များကို အခြေခံ၍ ထိုယုံကြည်မှု အစွဲတို့ ဖြစ်လာရခြင်းကိုပင် ပြန်လည် ဆန်းစစ်၍ မရလာသော အခြေအနေသို့ ရောက်လာ တတ်ပါ၏။
အနောက်နိုင်ငံ တစ်ခုတွင် မျောက် ၅-ကောင်ကို လှောင်ချိုင့် တစ်ခုတွင် ထား၍ စမ်းသပ်မှု တစ်ခု ပြုလုပ် ခဲ့ကြသည်။
ပထမ ဦးစွာ မျောက် ၅-ကောင်ကို လှေခါးတစ်ခု ရှိသော လှောင်ချိုင့်တွင် ထည့်ထား၍ - ရေခဲ တမျှ အေးစက်သော ရေဖျန်းနိုင်မည့် ရေပိုက်ကို အဆင်သင့် ထားရှိသည်။
ထို့နောက် လှောင်ချိုင့်၏ မျက်နှာကျက်မှ နေ၍ - လှေခါး ၏ အထက်တည့်တည် တွင် ငှက်ပျောခိုင် တစ်ခုကို ချိတ်ဆွဲ လိုက်သည်။
ထင်ထားသည့် အတိုင်း- မျောက် တစ်ကောင်သည် လှေခါးဆီသို့ အပြိုင်အဆိုင် လုတက်၍ ငှက်ပျောခိုင်ကို ယူနိုင်ရန် ကြိုးစားတော့၏။
ထိုမျောက် လှေခါးပေါ်သို့ စတက်သည်နှင့် သုတေသန ပြုသူတို့သည် - အောက်တွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သော မျောက် ၄-ကောင်အား ရေခဲရေ ဖြင့် ပက်ဖျန်း ပါတော့သည်။
ဒုတိယ မျောက်တစ်ကောင် လှေခါးပေါ် တက်သော အခါတွင်လည်း - ထိုနည်းတူပင် အောက်တွင် ကျန်သော မျောက်တို့အား ရေခဲရေဖြင့် ဖျန်းပြန်၏။
ထိုစမ်းသပ်မှုကို ထပ်ပြန် တလဲလဲ အကြိမ်များစွာ လုပ်လိုက်သော အခါ မျောက်တို့တွင် သင်ခန်းစာ တစ်ခု ရလာ၏။
ထိုအခါ မိမိတို့ ရေအေးဖြင့် ပက်ဖျန်းခံရခြင်းသည် အခြား မျောက်တစ်ကောင် လှေခါးပေါ် တက်ခြင်းဖြင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု မျောက်တို့က လက်တွေ့ သင်ခန်းစာရသွားသဖြင့် လှေခါးပေါ် တက်သော မျောက်ကို ရိုက်ရမည် ဟု နားလည်သွားသကဲ့သို့- မိမိတက်လျှင် လည်း အရိုက်ခံ ရမည်ကို သဘောပေါက် သွားသဖြင့် လှေခါးပေါ်သို့ တက်ရန် မကြိုးစားတော့။
သို့ဖြင့် မျောက် ၅-ကောင် စလုံး ထိုအခြေအနေ ကို နားလည်သွားသော အခါ-
လက်ရှိ မျောက်များအနက်မှ တစ်ကောင်ကို ဖယ်ထုတ်၍ ထိုအကြောင်းကို မသိသေးသော အခြား မျောက် အသစ် တစ်ကောင်ကို ထိုလှောင်ချိုင့်သို့ သွင်း လိုက်သည်။
မျောက်အသစ်သည် ငှက်ပျောခိုင်ကို မြင်သည်နှင့် လှေခါးပေါ်တက်ရန် ကြိုးစားတော့၏။ ထိုအခါ- မိမိတို့ ရေခဲရေဖြင့် အဖြန်းခံရခြင်းကို မဖြစ်လိုသည့် ကျန်မျောက် ၄-ကောင်တို့သည် ထိုမျောက်အား ဆွဲချပြီး ၀ိုင်းဝန်း ရိုတ်ပုတ်တော့သည်။
ထိုမျောက် အသစ်သည် ရေခဲရေဖြင့် အပက်ခံရသည့် စမ်းသပ်မှုကိုလည်း မသိခဲ့၊ သို့သော် သူသိ လိုက်သည်က - သူလှေခါးပေါ် တက်သည်နှင့် အထုခံ အရိုက်ခံ ရခြင်းဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် သူလည်း အကြောင်းရင်းကို မသိသော်လည်း လှေခါးပေါ်တက်ရန် ထပ်မကြိုးစားရဲတော့။
ထို့နောက်- ရေဖျန်းခြင်း စမ်းသပ်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သော ကျန် မျောက် ၄-ကောင် အနက်မှ တစ်ကောင်ကို အခြား မျောက်အသစ် တစ်ကောင်နှင့် အစားထိုးလိုက်၏။ ထိုအခါ တွင် ရေခဲရေ အတွေ့အကြုံ မရခဲ့သည့် စောစောက မျောက်ကလည်း ကျန်မျောက်တို့နှင့် အတူရော၍- လှေခါးပေါ်တက်သော မျောက်အသစ် အား ၀ိုင်းဝန်း ရိုတ်ပုတ်၏။
သေချာပြီးနောက်- ကျန်မျောက်တို့ကိုလည်း - မျောက်အသစ်တို့ဖြင့် တစ်ဆင့်ချင်း အစားထိုး သွား၏။
သို့ဖြင့်ပင်- လှောင်ချိုင့်ထဲတွင် ရေခဲရေဖြင့် စမ်းသပ်ခြင်းတွင် မပါဝင်ခဲ့သော မျောက်အားလုံး ကုန်သွားပြီး- ရေခဲရေ အကြောင်းကို မသိသည့် မျောက်တို့ချည်းသာ ဖြစ်သွား၏။
သို့သော် ထိုမျောက်တို့ သိသွားသည်မှာကား- လှေခါးပေါ် မတက်ရ၊ တက်လျှင် အားလုံး၏ ၀ိုင်းဝန်း ရိုက်ပုတ်ခြင်း ခံရမည် ဖြစ်သည်ဟု ဖြစ်၏။
သို့ဖြင့်ပင်- မည်သို့သော အကြောင်းရင်း သေသေချာချာ မသိရှိပဲ လျှက် - မျောက်တို့တွင် ဤအချက်သည် ဥပဒေ ဓလေ့ ထုံးစံ အဖြစ်သို့ရောက်သွား၏။
ထိုအချက်သည် မည်သည်ကို ဖေါ်ပြနေပါသနည်း။
မည်သို့ မလုပ်ရ၊ မည်သို့ လုပ်ရမည် ဆိုသော ထုံးတမ်း ဓလေ့တို့သည် တစ်ချိန်က အတွေ့အကြုံ တစ်ခု နှင့် သက်ဆိုင် ခဲ့၏။ ထိုအတွေ့အကြုံ မရှိတော့သော်လည်း- လက်ဆင့်ကမ်း လိုက်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ရိုးရာ ထုံးတမ်းတို့ ဖြစ်လာခဲ့ရ၏။
ထို့ကြောင့် မိမိ အနေဖြင့် အကြောင်းရင်းကို မမြင်သိ နားမလည်နိုင်ပါပဲလျှက် - ထိုဓလေ့ ထုံးစံ ကို ရှုံ့ချ ခြင်းသည်ကား - ကောင်းမွန်သော လုပ်ရပ် မဟုတ်ပါပေ။ အတိတ် အကြောင်း ရှိခဲ့ပါ၏။ အတိတ်က တွေ့ကြုံခဲ့သူတို့က - ကောက်ချက်ဆွဲ ယုံကြည်လာခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်၏။
သို့သော်-အချို့သော ယုံကြည်မှုတို့သည် အစွန်းရောက်သွားသော အခါ-
အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ကျေးရွာလေး တစ်ခုတွင် ၀မ်းနည်းကြေကွဲ ဘွယ် ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့၏။
များစွာသော ဘာသာရေး ယုံကြည်မှု၊ ရွာထုံးစံ၊ လူမျိုး ထုံးစံ မတူညီမှု တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားသော အိန္ဒိယတွင်- အချို့သော ကျေးရွာများတွင် မိမိရွာသူ၊ ရွာသား အချင်းချင်း ချစ်ကြိုက်ခြင်း၊ အိမ်ထောင်ပြုခြင်း မပြုလုပ်ရ ဆိုသော သတ်မှတ်ချက် ရှိသော ရွာအချို့ ရှိသကဲ့သို့၊ မိမိရွာသား ချင်းသာ အိမ်ထောင်ပြုရမည်၊ ပြင်ပ သူစိမ်းနှင့် ချစ်ကြိုက်ချင်း မပြုရ ဆိုသော ရွာများလည်း ရှိပါသည်။
ထိုကြေကွဲဘွယ် ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရွာလေးမှာကား- မိမိရွာသူ၊ ရွာသား အချင်းချင်း ချစ်ကြိုက်ခြင်း၊ အိမ်ထောင်ပြုခြင်း မပြုလုပ်ရ ဆိုသော သတ်မှတ်ချက်ရှိသော ရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါ၏။
ထိုရွာလေးတွင် လူငယ်လေး တစ်ယောက်နှင့် ရွာသူ မိန်းကလေးတို့ လူငယ်တို့ သဘာဝ အတိုင်း ချစ်ကြိုးသွယ် မိသွား၏။
သို့သော် တစ်ရွာသားချင်း မချစ်ကြိုက်ရဆိုသော ရွာထုံးစံကြောင့် လျှို့ဝှက်စွာ နေထိုင် ခဲ့ကြပြီး- နောက်ဆုံး တစ်နေ့တွင် ကောင်လေးက ကောင်မလေးအား ခိုးပြေးသွား၏။ ကောင်လေး၏ ညီအကို ၀မ်းကွဲ အိမ်တွင် ယာယီ ပုန်းအောင်းနေခိုက် - ၂-ဘက်မိဘ များနှင့် ရွာလူကြီးများ သိသွားပြီး- ထိုအိမ်အရောက် လိုက်လာခဲ့ကြတော့သည်။
ရွာထုံးစံကို ဖေါက်ဖျက်သော မိန်းကလေးအား - မိမိ၏ အရှက် ကို ကာကွယ်သည့် အနေဖြင့် (Honor Killing) မိန်းကလေး၏ ဘခင် ကိုယ်တိုင်- ဦးခေါင်းကို ရိုက်ခွဲ အဆုံးစီရင် လိုက်သည်သာ မက- ရွာသား လူငယ်လေး အားလည်း- ကျန်ရွာသူ ရွာသားများက ဘ၀ ဇတ်သိမ်း ပေးလိုက်ကြပါသည်။
သတင်းအရ ရွာသို့ ရောက်လာသော သတင်းထောက်မှ ထိုဖြစ်ရပ်ကို စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် မေးကြည့် သောအခါ- ကျေးရွာမှ တာဝန်ရှိ ပုလိပ်အရာရှိမှ ပြောပြခဲ့သည်မှာ- “ဒီကိစ္စဟာ မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စရပ် တစ်ခုပါပဲ- အခုမှပဲ ပြီးသွားတော့တယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သူဆိုလိုသော “မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စရပ်” ဆိုသော စကားသည်- ကောင်လေး နှင့် ကောင်မလေး တို့အား ဥပဒေ မဲ့ စီစဉ်ခဲ့ကြခြင်းကို ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်သည်ကို နောက်ဆက်တွဲ စကားအရ သတိထားမိ နိုင်ပါသည်။
ဟုတ်ပါပြီ။ သို့ဆိုလျှင် အချို့သော အယူအဆ တို့သည် - အစွန်းရောက်သွားပါက အခြားသူများ အတွက် အန္တရာယ် ဖြစ်စေတတ်သည်ကို နားလည်မည် ဆိုလျှင်-အောက်ပါ တို့သည် သာဓကများ ဖြစ်၏။
တစ်ချိန်က လူများအား သတ်ဖြတ်၍ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း ဆိုသော ယုံကြည်မှုမျိုး။
အနောက်တိုင်း ဘာသာရေး အစွန်းရောက်တို့ကြောင့် အကြားအမြင် ရသော အမျိုးသမီးများအား စုန်းဟု ယိုးစွပ်၍ အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းများ၊ (ပြင်သစ် အာဇာနည် အမျိုးသမီး ဂျုန်းသည်လည်း ထိုကဲ့သို့ အသတ်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်၏။ သို့သော် ဤသည်ကို သတ်ဖြတ်သည်ဟု မခေါ်ပဲ- Purification ခေါ် အပြစ်ရှိသော ထိုသူ၏ ၀ိညာဉ်အား မီးဖြင့် သန့်စင်ပေးခြင်းဟု သူတို့က ခေါ်ပါ၏။)
ဘာသာရေး စစ်ပွဲကြီးများ နှင့် အကြမ်းဘက် လုပ်ဆောင်မှုများ။
နောက်တစ်ဆင့် ထပ်ကြည့်လိုက်ပါစို့- တစ်ချို့သော အယူအဆ များသည် တိုက်ရိုက် အန္တရာယ် မရှိသော်လည်း- လူအများ၏ အန္တရာယ် ကျရောက်မှုကို ကာကွယ်ခြင်းအား ဟန့်တား ပိတ်ပင်ခြင်းဖြင့် - ဖြစ်ပေါ်လာသော အန္တရာယ်၏ ပမာဏကို ပို၍ ကြီးကျယ် စေခြင်း မျိုးများ ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာ တွင် Fire Drill ခေါ် မီးလောင်ခြင်း အရေးပေါ်ကိစ္စ ဖြစ်လာလျှင် မည်သို့ ပြုလုပ်မည် နည်းကို လေ့ကျင့်ကြရ၏။ ရုံးများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ တွင် ပုံမှန် လုပ်ဆောင်ကြရ၏။ ယခု အခါ အကြမ်းဘက်သမားများမှ ဓါတု လက်နက် တို့ဖြင့် တိုက်ခိုက်လာလျှင် သာမာန် ပြည်သူ တို့ အနေဖြင့် မည်သို့ လုပ်ဆောင်ရမည် ကို သိရှိ နားလည်ရန် Drill များ လုပ်ဆောင်ကြ၏။ အခြားနိုင်ငံမှ မိမိအား အဝေးရောက် ဒုံးကျည် ဖြင့် တိုက်ခိုက်လာလျှင် တုန့်ပြန် နိုင်စေရန် War Game Drill များဖြင့် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ကြ၏။
ဤလေ့ကျင့်ခန်း Drill တို့သည် မီးလောင်ခြင်း၊ ဓါတုလက်နက် အတိုက်ခိုက်ခံရခြင်း၊ စသည်တို့ ဖြစ်စေသော နိမိတ်များလား။ ထို လေ့ကျင့်ခန်း တို့သည် ဆိုးခြင်းကို ဖြစ်သော အကြောင်း တရားများလား၊ ဆိုးခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်၊ ထိခိုက်မှု နည်းပါးစေရန် ဖြစ်စေသော အကြောင်း တရားများလား ဆိုသည်ကိုတော့ ဦးစွာ စောကြောသင့်၏။
မဂ္ဂဇင်း ဆောင်းပါး အချို့တွင် - မီးသတ်ကားကို ရေဖြည့်ထား၊ ဆီဖြည့်ထား၊ ပန့်များ အလုပ် လုပ်မလုပ် စစ်ဆေး ထားမည် ဆိုပါက မီးလောင်မှု ဖြစ်တတ်သည် ဆိုသော ရေးသားချက် များကို ဖတ်မှတ်ဘူးပါသည်။
သို့ဆိုလျှင်- ထိုယုံကြည်မှုကို လိုက်နာမည် ဆိုပါက အောက်ပါတို့ကို ဦးစွာ စစ်ဆေး သင့်ပါသည်။
ထိုယုံကြည်မှု အတိုင်း လိုက်နာသော တနည်းအားဖြင့် မီးသတ်ကားကို အဆင်သင့် မလုပ်ထားလျှင် မီးလောင်မှု အမှန်တကယ် နည်းနိုင်၏ မနည်းနိုင်၏ ကို- ထိုယုံကြည်မှု လိုက်နာသော ဒေသ တွင် ဖြစ်ပွားသော မီးလောင်မှု အကြိမ် အရေအတွက်နှင့် လက်ရှိ မီးသုံးစွဲသော ပမာဏ အချိုး နှင့် အခြားနိုင်ငံများတွင် ဖြစ်ပွားသော မီးလောင်မှု အကြိမ် အရေအတွက် မီးသုံးစွဲ သော ပမာဏ အချိုးအစား- မည်သည်က ပိုများ ပါသနည်း။
မီးလောင်မှု အချိုးချင်း တူညီပါက- မည်သည်က ပို၍ ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေပါသနည်း။
မီးလောင်မှု အချိုးချင်း တူညီပါက- မည်သည်က ပို၍ အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်မှုကို ဖြစ်စေ ပါသနည်း။
သဘာဝ ယုတ္တိကျကျဖြင့် စဉ်းစား စေလိုပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ သည် အခြားဘာသာများကဲ့သို့ ယုံကြည်ရုံ သက်သက်မျှသာ မဟုတ်ပဲ- အကြောင်းတရား တို့ကြောင့် အကျိုးတရားများကို ဖြစ်စေသော ၀ါဒ ဖြစ်ရာ- ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာ လူမျိုးတို့သည် အကြောင်း အကျိုးကို ပို၍ပင် နားလည် သင့်ပါသေးသည်။
တစ်ဖန်- မီးသတ်ကား ကို အဆင်သင့် လုပ်ထားသော နေ့တွင် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားရခြင်း တို့ကို တိုက်ဆိုင်စွာ ကြုံရပါက-
ထိုမီးသတ် ၀န်ထမ်း ၏ မသိစိတ် Unconscious mind တွင် မီးလောင်မှု ဖြစ်လာမည်ကို အလိုအလျောက် အာရုံရခြင်း déjà vu ဖြစ်နေခြင်း မဖြစ်နိုင်ပေ ဘူးလား။
ရေကြီးသော နှစ်များတွင် စာဝတီး တို့သည် အသိုက်များ မြင့်မြင့် ဆောက်တတ်ခြင်းကို ဒီရေရောက် ကျေးရွာတို့မှ လူအများ သိထားတတ်ကြပါသည်။ စာဝတီး အသိုက် မြင့်မြင့် ဆောက်၍ ရေကြီးခြင်းလား၊ ရေကြီးမည်ကို တိရစ္ဆာန် တို့၏ Instinct တွင် အာရုံရ၍ အသိုက် မြင့်မြင့် ဆောက်ကြခြင်းလား။
ဂျပန် နိုင်ငံတွင် ငလျင်ကြီးများ မလှုပ်ခင် တွင် ငါးများသည် ကမ်းခြေသို့ ထူးခြားစွာ ရောက်လာ တတ်ခြင်း တို့ မြင်ရတတ်လေရာ- ငါးများ ကမ်းခြေ လာခြင်းသည် ငလျင် လှုပ်စေရန် ဖြစ်စေသော အကြောင်းတရားလား၊ ငလျင်လှုပ်မည်ကို ငါးများက ကြို၍ သိခြင်းလား စသည်တို့ကို သဘာဝ ကျကျ စဉ်းစား သင့်ကြပါသည်။
အရာ အားလုံးတို့သည် အကြောင်းတရား တို့ပေါ်သာလျှင် မှီခိုပါသည်။ အကြောင်းမဲ့ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်း တစ်ခုမှ မရှိပါ။ သို့သော် မည်သည်က အကြောင်းတရား အရင်းအမြစ် ဖြစ်နိုင်သည်ကို လည်းကောင်း၊ ထိုအစွဲသည် အကျိုးရှိမရှိ၊ အကျိုးပျက် မပျက် ဖြစ်နိုင်သည်ကို လည်းကောင်း စောကြောသင့်ပါသည်။
သို့ဆိုလျှင် မလိုအပ်သော အစွဲများ၊ အန္တရာယ် ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်းမှ ဟန့်တားသော အစွဲများကို ဆက်လက် ကိုင်တွယ် ထားသင့်ကြပါသလား။
မျောက် ၅ ကောင် စမ်းသပ်မှုကို သဘောကျပါတယ်ဆရာ။ ဓလေ့ထုံးထမ်းများကိုလည်း သတိပြုဖို့ စဉ်းစားဖို့ လိုလာပြီပေါ့ဆရာ။
အခြားသူတွေနဲ့ မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ အသက်၊ စည်းစိမ်၊ အိုးအိမ်တွေကို မထိခိုက် မပျက်စီးနိုင် သရွေ့- လူတိုင်းဟာ မိမိယုံကြည်ရာ ဓလေ့ ထုံးစံကို ချစ်မြတ်နိုး ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ယုံကြည်မှုကြောင့် ဒုက္ခရောက်ကြရတာ တွေထဲမှာ ဟစ်တလာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခဲ့မှုမျိုးကြောင့် - ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ရသလို၊ ဂျင်ဂျုန်း ကိစ္စမှာလည်း လူပေါင်းများစွာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆိပ်သောက် သေခဲ့ကြပါတယ်။ အားလုံးကို ဒုက္ခမရောက် စေဘို့က အဓိက ပါပဲဗျာ။ နျူမာန် (မိုးတား)
YE MYINT said...
ဗုဒ္ဒရဲ.အဆုံးအမအရတော့ လူတွေဟာ အ၀ိဇ္ခာခေါ်တဲ့ မသိမှု၊ မှားယွင်း သောယုံကြည်မှု မစ္ဆာဒိဌိအယူတွေနဲ. ကိုယ်မှန်မယ် ထင်တာတွေလုပ်နေ တာကြာခဲ့ပါပြီ။ ဆုံးမသွန်သင်လမ်းပြသူ၊ ဆုံးမထားတဲ့တရား နဲ. အဲဒီ့တရား တွေကို လိုက်နာလေ့ကျင့်နေသူအတွက်တော့ ဆရာတင်ပြထားတဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ကိစ္စတွေဟာလုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။
အင်မတန်သတိပြုသင့်သောအကြောင်းအရာတစ်ခုကို တင်ပြထားတဲ့ အတွက် သတိ တရားထားအစဉ်ထားလျင် မှားယွင်းမှုနည်းမှာပါလို.သာ ဖြည့်စွက်တင်ပြပါရစေ။ ဆရာ့စေတနာကိုလေးစားလျက်
ဥုစ် ပိုင်ရှင် နှင့် အတိတ်ဝဋ်ကြွေး။
ပြည်သူချစ်သော အင်ဒီရာ (သို့မဟုတ်) ပရိဝတ္တန ယောဂ သုံ...
ယုံကြည်မှု၊ ကြောင်းကျိုးတရား နှင့် အစွန်းရောက်မှုမ...